Casa Viva 2B, Bahía Ballena - I-Airbnb
Igumbi lakho lokulala e indlu encinci sinombuki zindwendwe onguRoy
ICasa Viva 2 yikhabhathi entsha neyodwa "yesikhongozeli" yokwabelana nabahlobo bakho, usapho kunye nabo ubathandayo. Ibekwe eBahia Ballena ("Whale Bay") kunxweme olukumazantsi ePasifiki eCosta Rica. Ujikelezwe yindalo enkulu, uya kukonwabela izandi zeemacaw ezinemibala eqaqambileyo, ubukele iinkawu zijinga ukusuka kwelinye isebe ukuya kwelinye, kwaye usenokujonga i-sloth emithini, ngelixa untywiliselwe kumahlathi ashinyeneyo aluhlaza kwaye kuphela. amanyathelo ambalwa ukusuka elunxwemeni.
Ifumaneka kanye ngaselwandle, imini nobusuku bakho buya kuzaliswa sisandi seentaka ezintyilozayo kunye namaza abetha ngaselunxwemeni. Ukuhamba ngokulula ukuya elunxwemeni ziimitha ezingama-150 kuphela (malunga nebhloko enye). Ngamaxesha okufuduka enyakeni (ngo-Agasti ukuya phakathi kuNovemba nangoJanuwari ukuya kutsho ngoMatshi), iCasa Viva 2 ibekwe kwindawo efanelekileyo kuhambo lokubukela iminenga kwaye imida yeMarino/Bahia Ballena National Park.
ICasa Viva 2 ibonelela ngendlela yobuchwephesha kwindlela entsha yombono wesikhongozeli, ibonelela ngegumbi lokulala eliqaqambileyo nelipholileyo elinesakhelo sebhedi yobugcisa, ingxangxasi engaphandle kwefestile yakho (ecinywayo ebusuku), kunye nedesika yabucala apho uhlala khona. ungahlala usele ikofu yakho. Ukutyibilika iingcango zeglasi kwipatio yakho kukunika imvakalelo yokuba yinxalenye yendalo. Kwaye kuthathelwe ingqalelo ngononophelo ukuba kungekuphela nje ukuqinisekiswa kokuthuthuzela, ukulula, kunye nokusebenza - kodwa kunye nokufikeleleka.
I-Casa Viva 2A kunye ne-2B zibonelela ngegumbi lokulala elibanzi, igumbi lokuhlambela elikhulu elinendawo yokugcina izinto zakho, kunye nepatio edibanisa nekhitshi ekwabelwana ngayo. Igumbi lakho lokulala lixhotyiswe nge-TV exhonywe eludongeni, iyunithi ye-air-conditioning, kwaye inomandlalo ophindwe kabini ukuhlalisa abantu aba-2. Igumbi lokuhlambela elikhulu linamanzi ashushu kunye neshawari, kwaye lixhotyiswe ngesepha, iphepha lethishu kunye neetawuli. Ipatio yakho inika izitulo ezi-2 kunye netafile encinci.
Unokufikelela iiyure ezingama-24 ekhitshini elibonelela ngetafile ye-4 ppl kwaye ixhotyiswe ngezixhobo zombane, ezinjengezi: microwave, blender, rice cooker, ifriji, isitovu, imbiza yekofu (kuquka ikofu + iswekile), iipleyiti, iiglasi/ iikomityi, neembiza, iipani kunye neempahla. Sikwabonelela ngempahla yokuhlamba (iwasha kunye nesomisi) kwindawo ngeendleko ezongezelelweyo.
ICasa Viva 2 ibekwe malunga nesiqingatha semayile ukusuka kuhola wendlela, ineendawo zokupaka zabucala, kwaye ifikeleleka ngokulula ngaphandle kokufuna isithuthi esiyi-4x4. Umnini uthetha iSpanish nesiNgesi.
Iindawo ezikufutshane zibandakanya: ukhenketho lokubukela iWhale, iWhale Tail Beach, i "Moses Path", iMarino/Bahia Ballena National Park, iUvita waterfall, iCaves eVentanas Beach, iManuel Antonio National Park (1 hr drive), Osa Peninsula (Corcovado Ipaki yeSizwe kunye nePiedras Blancas yeSizwe iPaki) kunye neDrake Bay (iiyure ezi-2 zokuqhuba), kunye nesigidi sokujonga. Ukuba undwendwela ngoFebruwari, unokude ubambe uMnyhadala woMbono!